Lalana eny Androhibe: nomena ny anaran-dRasoanaivo Jean Charles | NewsMada
Lalana eny Androhibe: nomena ny anaran-dRasoanaivo Jean Charles
Notokanana omaly ny lalana Rasoanaivo Jean Charles, mirefy 2 km manoloana ny tanàna iorenan’ny akany fibeazana ireo olona manana fahasembanana amin’ny saina Les Orchidées Blanches, eo Androhibe ary mitohy hatrany amin’ny sekoly ambony Enam. Olona manana fahasembanana amin’ny saina sady tratran’ny aretina parkinson izy ka ho fitsinjovana azy, nametraka didy miafina ny reniny nilaza fa amin’ny fotoana tsy ahafahan’ny fianakaviana mitaiza an’i Jean Charles intsony noho ny vesatry ny fahasembanany, atolotra ny fikambanana manabe olona toa azy ny fananany rehetra. Io fikambanana io no hikolokolo sy hikarakara azy mandra-pahafatiny.
Noraisin’ny fikambanana Les Orchidées Blanches an-tanana i Jean Charles fantatry ny rehetra amin’ny anarana hoe Razoky, ny taona 1976. Tena ela velona izy satria nahatratra 75 taona ary niavaka tamin’ny fahaizany mankasitraka ny fanehoana fitiavana nomena azy, hoy ny mpitantana ny akany, Randrianarivony Faralalao, omaly teny an-toerana.
Nitondra soa ho an’ny fikambanana ny fandraisana an-tanana azy fa niitatra ny fotodrafitrasa. Olona 1 000 no efa nahazo tombontsoa teo amin’ny akany hatramin’ny niorenany. Andro fahatsiarovana ny nahaterahan-dRasoanaivo Jean Charles, omaly ka nampifanandrifiana amin’ny fitokanana ny lalana mitondra ny anarany.